गैरआवासीय नेपाली संघबाट एउटा राज्यसंग बराबरको सहयोगको अपेक्षा खोज्नु अल्पबुझाई हो | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
गैरआवासीय नेपाली संघबाट एउटा राज्यसंग बराबरको सहयोगको अपेक्षा खोज्नु अल्पबुझाई हो
चिरन शर्मा लन्डन
कोरोनाको कहर कहाँ गएर समाप्त हुन्छ अझै ठेगान छैन् । विदेशमा नेपाली समुदायमा संक्रमण बढ्दो छ । उनीहरुको सहयोगको लागि विभिन्न समुह सकृय रुपमा लागेका छन् । प्रायः सबै देशमा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली कुटनीतिक नियोगको संयूक्त नेतृत्वमा राहत वितरणको काम भैरहेको छ ।
सबै देशमा २४ सै घण्टा हेल्प लाइन संचालनमा छन् तर केही संचारकर्मीहरु यथार्थ बुझ्ने प्रयासै नगरि नेपालबाट जुम घुमाएर बसेका छन् । फलना संस्थाले न्यूयोर्कमा यति डलर उठायो । ओहो ! गजव गर्यो, तर त्यही एनआरएनएले ३ हजार भन्दा बढीलाई राहत दिएको छ, करोड भन्दा बढी आर्थिक संकलन गरेको छ । २४ सै घण्टा हेल्प लाइन संचालन गरेर त्यहाँ सरकारले भन्दा ठूलो सेवा दिएको छ तर त्यो जुमको आँखा पर्दैन ।
यता दुईजना विद्यार्थी मिलेर सय जनाको नाम दर्ता गर्ने काम गरेछन् , ठूलै काम गरे । वेलायतमा यहाँको राष्ट्रिय हेल्थ सर्भिसले सिटमोल समयमा दिन सकेको छैन् तर एनआरएनएले घरघरमा लगेर औषधि बाढेको छ तर देखिन्न् !
मध्यपूर्वमा युएईमा लगातार राहत वितरण भैरहेको छ अहिले सम्म २५ सय भन्दा बढीले राहत पाएका छन् । यस्ता दुई दर्जन देशमा १० हजार भन्दा बढीलाई गैरआवासीय नेपालीले राहत दिइसकेको छ ।
नेपालमा सरकार भन्दा अघि बढेर करिब २ करोडको स्वास्थ्य सम्वन्धी सामग्री सातै प्रदेशमा पठाई सकेको छ । संघले विश्वभरका कोरोना पिडितको तथ्यांक संकलन गर्दे आएको छ त्यसको लागि २५ जना गैरआवासीय नेपाली डाक्टरहरु सकृय छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघबाट एउटा राज्यसंग बराबरको सहयोगको अपेक्षा खोज्नु अल्पबुझाई हो । यो सामाजिक संस्था हो यहाँ राज्यको जस्तो कुनै ढुकुटी हुदैन् र छैन् । तर पनि करोडौं रुपैयाँको राहत बाढ्न पछि परेको छैन् ।
संघको विदेशमा रहेका नेपालीहरुका भावनालाई नेपाल सरकार समक्ष पुराउने यसको मुख्य काम हो त्यसमा एक रति विचलित छैन् ।
त्यसैले ह्यात होटलको निर्वाचनलाई हेर्ने चस्मा फालेर नयाँ चस्मा लगाएर गैरआवासीय नेपाली संघलाई हेरौं । कमजोर पात्रलाई प्रस्तुत गरेर भैरहेका कामलाई समेत ओझेलमा पार्ने काम नगरौं । ज्यानको बाजी लगाएर राहतमा खटिएकाहरुको आत्मवल बढाउने काम गरौं ।
राज्यको उपस्थिती भनेको नेपाली कुटनैतीक नियोगहरुमा मात्र सिमित छ । जनशक्ति निकै कम छ । यस्तो महामारीमा आदी दर्जन भन्दा कम जनशक्ति भएका दूतावासहरुले केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । गरेनन् भन्न पनि मिल्दैन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ र सरकारी नियोग बाहेकका प्रायः संघसँस्था अहिले आइसोलेसनमा छन् । त्यसैले यो महामारी बिरुद्ध सबै पक्ष एक भएर भिड्नुको विकल्प छैन । बचौं र बचाऔं ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखालाई”टोकन अफ लभ” →